Anyị Clinics na Partners - Vondt.net
Anyị Clinics na Partners
- Ọhụụ anyị? Anyị na-arụ ọrụ mgbe niile Bebụ Onye Ọrụ Nlekọta Ahụike Kasị Mma Na-ahụ Maka Ahụike, Mkpịsị Aka na Nkwonkwo
VondtKlinikkene bụ netwọkụ ọkachamara na ụlọ ọgwụ nwere ebumnuche mgbe niile nwere oke mmụta pụrụ iche na nyocha, ọgwụgwọ na ọzụzụ. N'ime ndepụta dị n'okpuru, ị ga-ahụ ozi ndị ọzọ gbasara ụlọ ọgwụ ndị ejikọtara anyị, yana ndị mmekọ. Ọhụụ anyị bụ ka ị nwee obi ike na ị na-enweta ahụmịhe kachasị mma nke ndị ọkachamara ahụike nyere ikike n'ihu ọha nwere ọkachamara ọkachamara na akwara, akwara na nkwonkwo.
Lambertseter: Lambertseter Chiropractor Center na Ahụike Ahụike
Cecilie Thoresens bụ 17, 1153 Oslo (Lambertseter Senter - Helsehuset)
Nkwado: Ebe Eidsvoll Healthy Chiropractor Centre na Ọrịa anụ ahụ
Ọnụ Gatezọ Wmá Wergelands 5, 2080 Eidsvoll (Sundet)
Nkwado: Råholt Chiropractor Center na Ọgwụ
Ndewo, aha m bụ Alexander Andorff. Chiropractor nwere ikike na onye na-agwọ ọrịa na-agwọ ọrịa.
Abụ m onye isi-na-isi nke Vondt.net na Vondtklinikkene - ma na-arụ ọrụ na Lambertseter Chiropractor Center na Ahụike Ahụike. Dịka isi mmalite nke ọrịa musculoskeletal, ọ bụ ezigbo ihe ọ toụ inyere ndị ọrịa aka ịlaghachi ndụ ka mma kwa ụbọchị.
N'inwe ihe karịrị ndị na-eso ụzọ 75000 na mgbasa ozi mmekọrịta, yana ihe dị ka nde ndị ọbịa isii kwa afọ (n'etiti etiti July 6), ọ bụghịkwa ihe ijuanya nye ọtụtụ na anyị na-aza ajụjụ kwa ụbọchị maka ajụjụ gbasara ndị na-agwọ ọrịa n'ofe mba ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụ mpaghara. siri ike iru anyị. Site n'oge ruo n'oge anyị na-enweta ọtụtụ ajụjụ nke na ọ nwere ike isiri ike ịza ha niile, ọ bụ ya mere anyị ji kee ngalaba a - ebe anyị ga-eji nwayọọ nwayọọ, na mgbakwunye na ụlọ ọrụ ndị mmekọ anyị, gbakwunye ndụmọdụ anyị n'ime ọha na eze akwadoro nke ọma. ndị ọkachamara ahụike nyere ikike na mpaghara gị.
Oge akwukwo maka akwara gi na oria aka gi?
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmụtakwu gbasara ụlọọgwụ ma ọ bụ itinye akwụkwọ oge atọrọ, ị nwere ike pịa njikọ dị n’elu. A na-eme ọhụhụ na weebụsaịtị dị iche iche nke ụlọ ọgwụ. Enwere ike ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ ihe ndị yiri ya.